ဖူးနုသစ်: ပင်လယ်ထဲက ဂီတ
အကောင်းပြောနေရင်းနဲ့ သူက အရွှန်းကဖောက်သေးတယ် ကိုzt ဆို့ကတော့ .. ဥပမာပေးတာလည်း ကောင်းလိုက်တာ “ငါပြောမယ် စိတ်မညစ်နဲ့ အခုထက။ ငါပြောမယ် စိတ်မညစ်နဲ့ အခုထက။” ဆိုပဲ ဟဟဟ လူတစ်ယောက်ရဲ့ သီဆိုပုံနဲ့ မတူတဲ့ ပင်လယ်ဂီတ သံစဉ်လေးတွေအကြောင်း နားထောင်ရတာ အဓိပ္ပါယ်ရှိလိုက်တာဗျာ ကျေးဇူး :)
နားထောင်ကြည့်တယ်.. ဝေလငါးကလဲ ဆင်ကြီး မုန်ယိုပြီး အော်တာကျနေတာပဲ။ အဲဒါကြောင့်ပြောတာထင်တယ် ကုန်းမှာဆင် ပင်လယ်မှာ ဝေလ လို ့
ကျွန်တော့သူငယ်ချင်း ဝေလကတော့ တကယ် အဆိုကောင်းတယ်။ သူကတော့ ငါးမဟုတ်ဘူး.. လူ...
ပင်လယ်ပြင်ကို ဖြတ်ကျော်ချင်တယ် နှလုံးသားများလဲ လေးလံနေဆဲ အချစ်ရေ.. ဆိုတာ ဝေလငါးနဲ ့တော့ နဲနဲဆိုင်တယ်..
မိုးက မြေကြီးက ရွာလို့ ဆက်စပ်စဉ်းစားရင် ရှုးပေါက်တဲ့အခါ ပြောင်းပြန်ဖြစ်တော့ တော်တော် ခက်မှာ...
To be with you----To be free. I am sailing. Oops--sorry, I am swimming.
မောင်ပီအမ် ... တို့ကသိပ်တော့ မခက်ခဲသေးပါဘူးလေ။ တကယ်ခက်မှာက ... ..... ......။
အမ နားထောင်ကြည့်ပီးပီ ဘယ်လိုအသံကြီးတွေမှန်းမသိဘူး
နားထောင်ကြည့်ပြီးပါပြီ... လေးခုမြောက်နဲ့ငါးခုမြောက် အသံလေးတွေက လှိုဏ်သံလေးတွေပါပြီး ချစ်စရာကောင်းတယ်... အသံပြွှန်မပါဘဲ အဲလို အသံလေးတွေထွက်တာ အံ့သြစရာနော်... မျှဝေတာကျေးဇူးပါဗျိုးးး